रत्नपार्क: एक अनौठो प्रेमकथा « प्रशासन
प्रकाशित मिति :9May, 2020 2:49 pm
यति आकर्षक शरीर देखेर तत्कालीन अवस्थामा यौनाङ्गबाट परिचालित मेरो मनले आफूलाई थाम्न सकेन।
“जाने हो ? तीन हजार दिन्छु रातभरिलाई”
उनी धनी बुबाको बिग्रेको छोरी रहेको ठम्याउन मैले धेरै समय खर्चिनु परेन। र आज आफ्नो पुरुषत्व प्रस्तुत गरेर भोलिदेखि आफ्नो र उनको यौन प्यास मेटाउन पैसा खर्च गर्न नपर्ने योजना बनाउन पनि धेरै समय लागेन। दैनिक दुई घण्टा “जिम हल”मा बिताउने मलाइ आफूले बनाएको योजना सफल हुने कुरामा पूरा विश्वास थियो।
स्कुटिको “हर्न”ले मेरो कल्पना भङ्ग गर्‍यो।
म समय खेर फाल्ने पक्षमा बिलकुलै थिइन। मैले उनको हात समाएर उसलाई आफूतर्फ ताने । उनले पनि आँखा चिम्लेर आत्मसमर्पण गरिन्। उनको काँप्दै गरेको ओठलाई चुम्दै सुरु भएको त्यो नगदी प्रेम उनको शरीरको हरेक अङ्ग सुम्सुम्याउदै बेजोड हलचलपछी उत्कर्षमा पुगेर शिथिल भयो।
एक महिनापछि एउटा नयाँ नम्बरले मेरो मोबाइलको “रिङ्गटोन” बजायो।
मैले हारेको महसुस गरे । उनी मतिर हेरिरहिन् ।
“कफी खानुहुन्छ ?”
मैले समर्थन गरे ।
सोफामा बसेकी उनको नजर कोठाको छतमा अडिएको र अनुहार शून्य थियो। कतै गहिराइमा डुबेकी थिइन् उनी। उनीमाथि मेरो तारिफको केही पनि असर भएन।
“यौन महिलाको आवश्यकता हो, अशक्तता होइन।”
“विवाहको पहिलो रात उसले मलाइ सबै थोक भनेको थियो। छोडेर जान सल्लाह पनि दियो। आफ्नो वास्तविकता समाजलाई भन्न सक्ने साहस थिएन उसमा। तर मलाइ धोका दिन चाहेन। मैले छोडेर गए पछि समाजले गर्ने प्रश्नहरूको सामना कसरी गर्थ्यो उसैले जानोस्। उसलाई अपनाउने वा त्याग्ने निर्णय लिन त्यति सजिलो थिएन। कैयौँ दिन “माथापिच्ची” गर्नुपर्‍यो, कैयौँ रात जागेरै बिताउनुपर्‍यो। यौनको लागि उसलाई छोडेर म पनि उ विरुद्ध उभिएको समाजमा मिसिनु कि उसको वास्तविकता लुकाउन सहयोग गरेर कम्तीमा एक जना समलिङ्गीलाई सहज जीवन बिताउन सहयोग गर्नु ! यौन महिलाको आवश्यकता हो, अशक्तता होइन सर। मैले साथ दिने निर्णय गरे।”
“त्यसो भए म सङ्ग बिताएका रातहरू..”
कफी र समय दुवै सकियो। म फेरि उनको स्कुटरको पछाडिको सिटमा थिए।
रत्नपार्क पुगेर म ओर्ले। छुट्टिनु अगाडि उनले मेरो नाम सोधिन् र भनिन् “सायद यो हाम्रो अन्तिम भेट हो सर।”
करिब दस महिना पुग्नै लाग्दा मेरो फेसबुकमा फोटोसहितको एउटा मेसेज आयो, जसले मेरो लागि प्रेमको परिभाषा नै परिवर्तन गरिदियो। हो, त्यो उनैको मेसेज थियो।
“सङैको फोटो तपाईँको र मेरो सन्तानको हो। तपाईँसङ बिताएका रातहरू उसकै लागि थियो। तपाइले दिएको चार हजारले उसलाई हरेक धर्मको धर्मग्रन्थ किनिदिनेछु, पढाउनेछु र सही अर्थ बुझाउनेछु । उसलाई मानिसबिचको विविधता स्विकार्न सिकाउनेछु। हरेक मानिसलाई समान व्यवहार गर्ने बनाउनेछु। जसले गर्दा उसको समाजमा कसैले पनि आफ्नो वास्तविकता लुकाउनु नपरोस्।”
Tags : कथा
20 February, 2021 10:11 am
करिब २ वर्ष अघिको कुरा हो । नियमित जसो त्यो
20 February, 2021 9:00 am
एउटा बुढोको चिट्ठी
छोरा ! तिम्रो चिठी पाएँ हाकिम भएछौ । आज लागेको
15 February, 2021 7:36 pm
भन्सार महानिर्देशक दाहालको ‘कोरोनाकालमा भन्सार प्रशासन’ पुस्तक सार्वजनिक
काठमाडौँ । भन्सार विभागका महानिर्देशक(डिजी) सुमन दाहालद्वारा लिखित ‘कोरोनाकालमा भन्सार